I-china Abicah Ishidi Lerabha Labakhiqizi beSolar Laminator nabaphakeli | UCayce Meyi
Ikhwalithi yimpilo yebhizinisi. Le nkampani inamathela kakhulu ekulawulweni kwekhwalithi yomkhiqizo. Ineqembu labasebenzi bokuphathwa kwekhwalithi yobungcweti, abahlonyiswe ngama laboratories womkhiqizo wobungcweti, amakamelo okuhlola, kanye namalabhorethri.
Ikhwalithi yimpilo yebhizinisi. Inkampani inamathela kakhulu ekulawulweni kwekhwalithi yomkhiqizo. Ineqembu labasebenzi bokuphathwa kwekhwalithi yobungcweti, abahlonyiswe ngama laboratories womkhiqizo wobungcweti, amakamelo okuhlola, kanye namalabhorethri. Ngesikhathi senqubo yokukhiqiza, inamathela ekukhiqizeni okujwayelekile futhi ijabulisa izwe nezimboni ngokuqinile. Amazinga namazinga ezinkampani ukunika amandla imikhiqizo ukuhlangabezana nezidingo zomsebenzisi. Imikhiqizo yeCaycemay Company ifaka zonke izinhlobo zemisebenzi ekhiqizwa ngabantu ezweni lonke, kanti eminye imikhiqizo iye phesheya nasemhlabeni. Isikali sayo sokukhiqiza, ikhwalithi, intengo, ukulethwa, kanye nensizakalo izuze udumo oluphezulu oluvela kumakhasimende futhi zijabulela idumela eliphakeme.
Imikhiqizo yenkampani ihlose imikhiqizo esezingeni eliphakeme, futhi ilwela ukugaya futhi imunce ubuchwepheshe bangaphandle ukuze buyise ukungenisa ngaphakathi ezweni futhi kwandise izinga lasendaweni. Iseyili ekhanya ilangabi yezimoto zesitimela inikezwe izinkampani zakwamanye amazwe. Amashidi abicah abamba uhhafu wemikhakha kuma-laminator elanga, ingilazi, ukhuni, amacansi wamakhadi, njll .; izinto zokufaka uphawu zenjoloba embonini ye-petrochemical zijabulele idumela eliphezulu;
Ishidi le-rubber labicah le-laminator yelanga, ishidi le-Caycemay eliphikisayo elingasebenzisi izinyembezi lisebenzisa izinto zomkhiqizo ezidume umhlaba wonke, ubuchwepheshe obunobunikazi obunamandla kanye nomkhiqizo okhethekile wokukhiqiza umugqa womhlangano, lo mkhiqizo unokuqina okuphezulu nokwethenjelwa okuhle, futhi usetshenziselwa ubuchwepheshe bama-laminator elanga, njll. imishini
Lo mkhiqizo wethula izinto eziqinisiwe ezinobungani obumelana ne-asidi, obuphakathi nendawo, obungamelana nezinga lokushisa elinamandla futhi imishini ekhethekile yohlaka ngokuya ngebhodi le-silica gel elinobungani bemvelo. Ngaleyo ndlela, amandla okuqina, amandla ezinyembezi, nokuqina kobukhulu bepuleti le-silicone lithuthukiswa kakhulu, futhi impilo yensizakalo yomkhiqizo yandiswa.
Futhi kunenzuzo yokuthi lapho ishidi lenjoloba lisetshenziselwa umkhawulo, ngeke lidale umonakalo kumodyuli weseli yelanga. Ububanzi obukhulu bungafinyelela ku-4000mm ngaphandle kwemikhumbi.
Ukuqina (ugu A) 60 ± 2
Ukudabula amandla Mpa≥ 10.5
Izinyembezi amandla N / mm≥ 40
Ukumelana nokushisa ℃ 200
Ukumelana ne-EVA (kuqhathaniswa) kuhle
Langaphambilini I-Silicone Rubber Cushion Yokwenza I-Laminator Yokwenza Amakhadi
Olandelayo: Ishidi Le-Rubic Sheet Lemboni Yengilazi